खोजतलास – Swadesh Online
माडीमा सशस्त्र प्रहरी बलको थप ३ वटा बोर्डर आउट पोष्टहरु स्थापना हुने भएका छन् । माडी नगरपालिका वडा नं. १, ६ र ९ मा नयाँ बि.ओ.पी. क्याम्पहरु स्थापना हुन...	Read more »
बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी समेत अस्थायी क्रसर प्लाण्ट राख्ने चक्करमा
स्वदेश न्यूज डेस्क — ०३ भदौ, २०७७0comment
चितवन । पूर्वी माडीको देबेन्द्रपुरदेखि बगहीँसम्म कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी समेत अस्थायी क्रसर प्लाण्ट राख्ने चक्करमा अल्झिएको छ । यसअघि बनकट्टादेख देबेन्द्रपुरसम्म १५.२ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे...	Read more »
चितवन । सुकुम्बासी बस्तीमा आगो लगाउने र घर भत्काउने विवादास्पद कार्यको नेतृत्व गरेका निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्तलाई निकुञ्ज मुख्यालय कसरा तानिएको छ । निकुञ्जको माडी बगहीँ सेक्टर...	Read more »
बस्तीमा आगजनी तथा हात्ती लगाई क्षती पु-याएसंगै माडीका सुकुम्बासीहरु आक्रोशित
स्वदेश न्यूज डेस्क — ०४ साउन, २०७७0comment
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले कुसुमखोला निवासी सुकुम्बासीहरूको घरमा आगजनी तथा हात्ती लगाई क्षती पु-याएसंगै माडीका चेपाङ र सुकुम्बासीहरु आक्रोशित भएका छन् । निकुञ्जले शनिवार माडी-९, कुसुमखोला निवासी दाङ...	Read more »
निकुञ्ज प्रशासनद्वारा माडीको कुसुमखोलामा बस्तिमा आगजनी÷हात्ती लगाएर ८ वटा घरहरु भत्कायाे
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले माडीको कुसुमखोलामा २ वटा घरमा आगलागी गरेको छ भने हात्ती लगाएर ८ वटा घरहरु भत्काई दिएको छ । निकुञ्जको अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गरेको...	Read more »
ठोरीको सीता गुफा छेउको सिमाना पिल्लर भारतीय पक्षले भत्कायाे
चितवन । नेपाल भारत सीमावर्ती ठोरीको सीता गुफा छेउको सिमानामा रहेको सिमाना पिल्लर भारतीय पक्षले भत्काएको छ । सीमा पिल्लर उखेलेर फ्याँकिएको अवस्थामा भेटिएको हो । सीताले तपस्या गरेको...	Read more »
बाल्मीकि आश्रम यातायातको असुविधाका कारण ओझेलमा
तेश्रो नगर परिषद् तयारीको सन्दर्भमा नेकपा माडीद्वारा नीतिगत सुझावहरू पेश
०७ साउन, २०७७